How to Start a Business You Know Nothing About and Succeed - Sicko News
Ma tahay markii ugu horeysay ee ganacsade leh fikrad hal abuur cusub? Hadday HAA tahay, halkan waxaa ku yaal hage dhameystiran oo ku saabsan sida loo bilaabayo ganacsi oo aadan waxba ka ogayn kuna guuleysan.
Haddii aad waligaa waqti u qaadatay inaad wax ka barato inta ugu badan ee ganacsatada guulaha badan ee kugu xeeran, waxaad garwaaqsan lahayd in tiro badan oo ka mid ahi ay ku lug leeyihiin ganacsiyada aan lagu soo tababarin dugsiga inay sameeyaan. Inaad ku guuleysato ganacsade ahaan iyo maalgashadeedu waxay dhammaantood ku saabsan tahay ka faa’iideysiga fursadaha markaad la kulanto.
Waa xaqiiqo in ay fiicantahay in aad lahaatid ugu yaraan aqoon aasaasi ah oo ku saabsan ganacsi kasta oo aad rabto inaad gasho, laakiin waqti isku mid ah, waxaad sidoo kale bilaabi kartaa ganacsi aadan aqoon u lahayn. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad sameyso si aad u bilowdo waa inaad raadiso ganacsi faa’iido leh, ka dibna aad hesho dhammaan macluumaadka kaa caawin kara inaad bilowdo.
Nuxurka qodobkaani waa inuu kaa caawiyo inaad ka takhalusto fikirka ah inaad kaliya bilaabi kartid oo aad ku guuleysan karto ganacsi aad si sax ah loogu tababbaray inaad qabato. Waxa jira dhowr agab oo ka caawin kara rookie inay bilaabaan ganacsi kasta oo ay doortaan una dhisaan si ay uga faa’iideystaan ​​waqtiga diiwaangelinta.
Hadda haddii aad ciyaareyso oo aad bilaawdo ganacsi aadan aqoon u lahayn, markaa 10ka talooyin ee soo socdaa waxay kuu noqon doonaan kuwa adiga waxtar kuu leh:
10 Tilmaamo Adag oo Loogu Talo Bilaabmayo Ganacsi Ma Jirto Wax Aad Ka Ogaatid
1. Baadhis balaadhan oo ku saabsan fikradaha ganacsiga
Waxa ugu horreeya uguna muhiimsan ee aad u baahan tahay inaad sameyso si aad u xasiliso bilowga ganacsi aadan aqoon u lahayn ayaa ah inaad sameyso cilmi baaris ballaaran oo ku saabsan fikradaha ganacsiga. Waxaa jira dhowr qalab oo kaa caawin kara inaad sameyso baaritaan ballaaran oo ku saabsan fikradaha ganacsi ee adiga ku anfici kara. Waad adeegsan kartaa internetka, waad akhrin kartaa buugaagta ganacsiga, iyo sidoo kale iskaa u caawinta iyo buugaagta dhiirrigelinta ah et al.
Waxaa jira odhaah sidan u socota, ‘Fursad ayaa imanaysa laakiin hal mar’ iyo ‘umana lihid fursad labaad oo aad ku samayso muuqaal hore’. Waxaa la ogyahay inaad tahay firfircooni ahaan ganacsade haddii aad rabto inaad noqoto qof ganacsi wanaagsan. Firfircoonida waxay dhammaanteed ku saabsan tahay ka shaqeynta fursadaha iyo fikradaha ganacsiga sida ugu dhakhsaha badan ee aad awoodid marka aad mid noqoto.
3. Iibso Franchise
Shaki iigama jiro mid ka mid ah qaababka ugu fudud ee aad ku bilaabi karto ganacsi aadan aqoon u lahayn waxa weeye inaad iibsato iibsiga ganacsiga hadda jira. Iyadoo la adeegsanaayo franchise, uma baahnid inaad ka walwasho dhammaan waxyaabaha murugsan ama waxyaabaha loo baahan yahay si aad si guul leh ganacsiga u maamusho. Mar alla markaad iibsato franchise, waxaa lagu siin doonaa dhamaan qalabyada iyo howlaha kaa caawin kara inaad bilawdid.
4. Qaabab Ganacsi Guul Leh
Hab kale oo aad ku bilawdo ganacsi aadan aqoon u lahayn ayaa ah in la fahmo moodooyinka ganacsi ee guuleysta. Tani waa mid aad u faa’iido u leh dadka aan awoodin caasimada inay iibsadaan iibsiga guryaha. Waxaad ikhtiyaar u leedahay inaad barato meherad guuleysata meel fog ama u dhow. Marka laga hadlayo qaab ganacsi guul ah oo qaab ganacsi guul u ah dhow, waxaad ubaahantahay inaad si rasmi ah u dalbatid oo aad u shaqeysatid shaqo barasho ahaan.
5. Iibso Bakhaarado
Iibsashada kaydka waa hab kale oo lagu bilaabayo ganacsi aadan aqoon u lahayn. Markii aad iibsanayso saamiyada shirkada, waxaad si otomaatig u noqoneysaa qayb shirkad leedahay mana u baahnid inaad walwal ka qabtid howlaha ganacsi ee maalinlaha ah ee ka dhaca shirkadda. Welwelkaagu wuxuu noqon doonaa oo keliya qeybsiga lagu siiyo adiga waqtiyada caadiga ah.
6. Maskax furan
Inaad noqoto qof furfuran waa lama huraan u ah maalgalin maskax kasta oo maskax culus iyo guul leh. Haddii aad rabto inaad bilaawdo ganacsi oo aadan waxba ka ogayn, markaa waa inaad maskaxdaada u furtaa fikradaha iyo fikradaha kala duwan. Runtu waxay tahay markii aad maskax furnaato, waxaad si fudud u baran kartaa waxyaabo kaa caawin doona ma aha oo kaliya ganacsigaaga, laakiin sidoo kale noloshaada shaqsiyeed.
7. Dabaaldegyada Fursadaha Ganacsi
Markaad la kulanto fursado ganacsi oo guulo leh, waa inaad wax uun ka faaiideysaa haddii aad damacsan tahay inaad bilowdo ganacsi aadan aqoon u lahayn. Runtu waxay tahay inaad baran karto farsamooyinka ku lug leh ganacsiga markaad kobcinaysid ganacsiga. Haddii aad dib u dhigto ku dhaqaaqista fikradda, waxaad u istaagtaa fursad aad qof kale fikirkaaga ugu weyso. Lacala hadii aad dhibaato ku qabtid raasamaal, halkan waxaa ah sida ganacsiga loogu bilaabayo lacag la’aan.
8. Khubaro Kiro ah
Hal shay oo wanaagsan oo ku saabsan lahaanshaha saldhig weyn ee caasimada ayaa ah inaad bilaabi karto ganacsi kasta oo aadan wax fikrad ah ka qabin. Waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa inaad raadsato ganacsi macquul ah oo faa iido leh oo aad ku maal gasho, ka dibna aad kireyso khubaro si ay kaaga caawiyaan inaad ganacsiga maamusho. Waxaa weheliya la-taliyeyaal ku takhasusay inay ka caawiyaan maal-gashadeyaasha sidii ay ganacsi uga dooran lahaayeen goob kasta oo ay doorteen. Waad raadsan kartaa la taliyayaasha noocan oo kale ah haddii aad runtii rabto inaad bilowdo ganacsi aadan aqoon u lahayn.
9. Ka Qaybgal Kulliyadda Ganacsiga ama Iskuulka Ganacsiga
Waad iska qori kartaa oo tagi kartaa kulleejad ganacsi ama iskuul ganacsi haddii aad damacsan tahay inaad ganacsi bilowdo waxba kama ogid. Kulliyadaha ganacsiga iyo iskuulada meheradda, waxaad fursad u leedahay inaad wax ku baratid ganacsiyada aadan waxba ka aqoon. O
wax aad u wanaagsan oo ku saabsan kulliyadaha ganacsiga iyo dugsiga ganacsiga ayaa ah in si sax ah laygu tababari doono sida loo diyaariyo qorshayaasha ganacsi ee shaqaynaya iyo sida loo qoro soojeedimaha ganacsiga ee guuleysta. Tirakoobku wuxuu leeyahay in kabadan 50 boqolkiiba dadka ku tababbaray kuliyadaha ganacsiga waxay u muuqdaan inay ku fiicnaadaan ganacsi kasto oo ay maal gashadaan.
10. Ka Qaybgal Waxqabadka Ganacsiga
Haddii aad rabto inaad ganacsi bilowdo waxba kama ogid, markaa waa inaad diyaar u ahaatid inaad ka qeyb gasho madadaalo ganacsi. Arimaha ganacsiga, waxaad fursad uheleysaa inaad lahadasho milkiileyaasha ganacsiga hada jira, weydii dhamaan su’aalaha aad rabto inaad weeydiiso oo aad ku iibsato xirmooyinkooda ganacsi. Haddii aad rabto inaad ogaato taariikhaha iyo waqtiga hawsha ganacsiga la qaban doono hareerahaaga, markaa waxaa lagugula talinayaa inaad si joogto ah uga baarto internetka si aad u ogaato.
Halkaas ayaad ku haysaa; Tobanka tallooyin ee ugu sarreeya ee kaa caawin kara inaad bilowdo ganacsi aadan aqoon u lahayn. Waxa ugu muhiimsan waa in la hubiyo in aad tahay qof shaqeeya oo hubiya in aad haysatid raasamaal.
how to How to Start a Business How to Start a Business You Know Nothing About How to Start a Business You Know Nothing About and Succeed how to start business